Aza gaga amin’izao raharaham-pirenena izao… | NewsMada
Tokony hivarotra ny fananany ary hizara izany ho an’ny sahirana, hono, ny mpanohitra, raha milaza ho tia vahoaka. Vavan’ny olom-boafidy iray io. Solom-bavan’iza: ny vahoaka sa ny fanjakana? Ny tena no menatra.
Fizarana ny fananan’ny tena ve no hoe fitsinjovana vahoaka? Nefa tsy manao izany ny mpitondra milaza isan’andro vaky fa manao fampandrosoana, efa manakaiky vahoaka sy manala ny fahasahiranany…
Tsy ny mifanohitra amin’izany aza no mitranga? Miharihary ny tsy firaharahana vahoaka. Misy aza ny mihinana sy mangeja vahoaka. Izay no mampitombo an-dalana ny fitsikerana etsy sy eroa, fanoherana…
Tsy mahagaga izao toe-draharaham-pirenena sy fiainam-bahoaka izao, raha izany no mba toe-tsaina sy fijerin’ny olom-boafidy na mpitondra. Tena fanavotana vahoaka ve ny fivarotan’ny tena fananana sy fizarana izany?
Manampy isa ny mahantra aza ny fisian’ny olona iray na roa mizara ny fananany rehetra ho an’ny vahoaka: lasa mahantra izy manao izany; ny vahoaka, tsy hanankarena amin’ny hoe samy mahazo kely avy amin’izay zaraina aminy.
Ny mifanohitra amin’izany aza no mila atao: fanangonam-bola homena ny olona iray na roa, vondrona na fikambanana… mba hampiasany azy. Izay fahazoana miasa sy mampiasa vola izay no tsy misy na tsy ampy.
Tsy ny fizarana fananana no fitiavana sy fanavotana vahoaka, fa ny fanomezana sehatra hiasany: fampanjakana ny fandriampahalemana, fanamorana ny fisamborana sy fampiasam-bola, famatsiana fitaovana, fanofanana…
“Raha misy mitady trondro, omeo fintana hanjonoiny”, hoy ny ohabolana sinoa. Izay politika izay no tsy misy na tsy ampy amin’ny mpitondra? Mibahan-toerana tsinona ny famonoana afo hoe manao zavatra, fisehoana ivelany…
Zatra mizara vola na zavatra amin’ny fampielezan-kevitra ny sasany, ka fivarotana sy fizarana fananana no hoe fitiavana sy fanavotana vahoaka? Tsy mahagaga raha izao ny raharaham-pirenena: manjaka ny kolikoly, tian-kano tsy tian-kano…